ID PUBG Mobile Hack ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
LD PUBG Mobile emulator mbanye anataghị ikike
Ndị iro nwere ọtụtụ ihe ị ga - echegbu ugbu a ị nọnyeere anyị!
Nweta ego PUBG kacha mma hacks nwere ike ịzụta, ebe a na Gamepron
Mgbe ụfọdụ ị ga-emerịrị ọbụna karịa! Zụta igodo ngwaahịa dị izu 1 taa
Bụrụ onye otu WinThatWar PUBG Mobile ezinụlọ site na ịzụrụ isi ngwaahịa ọnwa 1 taa!
Iji PUBG Mobile LD emulator anyị na-enye gị ohere ịnweta atụmatụ ị na-echeghị na ọ ga-ekwe omume mgbe ị na-egwu PUBG Mobile. Can nwere ike iji Aimbot nke ga - eme ka ndị iro gbue ọsọ, ma ọ bụ ọbụnadị Radar na - eme ka ị mụrụ anya!
PUBG Mobile Emulator LD Ozi
Nweta aka elu n'agbanyeghị onye ị na-egwuri egwu na PUBG Mobile! Iji PUBG Mobile Emulator LD mbanye anataghị ikike iji kwatuo ndị iro ọ bụla na-anwa anwa iguzo n'ụzọ gị, ebe ọ bụ na ngwa ọrụ a gụnyere ihe niile achọrọ iji bụrụ onye isi na PUBG. Imeri egwuregwu egwuregwu royale siri ike dịka ọ dị, mana mgbe ị tụbara ndị egwuregwu nwere ahụmahụ na ngwongwo na-enweghị isi n'ime ngwakọta, ọ na-eme ka ihe sie ike karị. Ọ bụ ya mere iji PUBG Mobile Emulator LD cheat ga-abụ ihe kachasị mma ị megoro, dịka "ihe akaebe dị na pudding"!
Họrọ site na ọtụtụ nhọrọ ESP dị iche iche (gụnyere nke Item na Player ESP), chọpụta usoro ọhụụ site na iji PUBG Mobile aimbot anyị kpamkpam nwere ike ịhazi (na-egosipụta njigide / akpaaka na mkpọchi mara mma), yana ọtụtụ ihe ịtụnanya ndị ọzọ. Adaberela na enweghị usoro iji nweta “dub” ma jiri PUBG Mobile Emulator LD kama!
Player ESP (Ọkpụkpụ-igbe, snaplines)
Ozi Iro (ahụike, agha, anya)
Loot ESP na nzacha
Ebe nchekwa Aimbot
Ezigbo & FOV customizable
Ebumnuche igodo configurable
Chọsie ike ịhọrọ ọkpụkpụ
Speed ​​anataghị ikike
Banyere PUBG Mobile Emulator LD
Zuru okè maka ndị na-eji Windows 10 ma ọ bụ ka mma, mbanye anataghị ikike a mepụtara iji kwado Intel / AMD CPU's (ebe ọ na-akwado Nvidia na AMD GPUs). Ọ na-abịa naanị n'asụsụ Bekee ma mgbe ọ ga-emechi HWID, ịnwere ike iji HWID Spoofer nke na-abịa n'akụkụ aghụghọ PUBG a iji hụ na ị nwere ike igwu egwu. The aimbot atụmatụ ọtụtụ configurable nhọrọ, otú ị ga-esi hazie gị hacking ahụmahụ dị ka mgbe n'ihu ebe a na WinThatWar!
Imdị Aim Bone Selector anyị ga - eme ka ị nwee ike ịdabere akụkụ ụfọdụ nke ndị na - emegide ahụ, na ọrụ Loot ESP ga - eme ka ịchọta egbe kacha mma dị mfe.
Gini mere iji jiri PUBG Mobile Emulator LD kari ndi ozo enye?
Ndị ọzọ na-enye ọrụ anaghị eme ike ha niile mgbe a bịara n'ịrụpụta ngwa ọrụ, ma ọ bụ naanị na ha na ndị mmekọ nwere ntụkwasị obi na-elekwasị anya n'ịdị mma. Agbanyeghị, ị na-eme atụmatụ ịbịaru mkpa PUBG Mobile mbanye gị, cheta na WinThatWar dị iche karịa ndị na-eweta mbanye anataghị ikike ọdịnala gị. Companieslọ ọrụ ndị a na-elekwasị anya na ịkpata ego na anaghị eche banyere oke nke nhapụta ha, mana WinThatWar bụ nke megidere nke ahụ. Gaghị egbusi ego mgbe ị zụrụ ihe maka aghụghọ na WinThatWar, ọ bụ ya mere ndị ọrụ ji abịaghachi mgbe niile maka ihe ọzọ - anyị na-arụ ọrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi!
"Ọ bụ ezie na enwetụbeghị m mbụ, WinThatWar mere ka ihe a niile bụrụ usoro dị mfe."
"Dị ka ọkachamara hacker enwere m ọtụtụ mkpa, ihe niile WinThatWar na-ezute!"
"Hacks na-agaghị na-ga-bara uru, ma ọ bụrụ na ị site na ha site WinThatWar."
"Ebe ọ bụ na enweghị m ike ịdabere na ndị otu m, m ga-atụkwasị obi na WinThatWar iji nọgide na-asọmpi!"
"Site na ihe m nwere ike igwa, WinThatWar ga - enwe ngwa oru diri gi n’agbanyeghi ogo nka gi."
"Chee echiche banyere mmeri ndị ahụ niile ị nwere ike ịbibi ugbu a na WinThatWar mbanye anataghị ikike gị!"
"Girl hackers dịrị n'otu! Na WinThatWar enweghi igbochi m n'egwuregwu niile m hụrụ n'anya."
"The ọkachamara hacking idaha kemgbe na-achọsi ike nke ọrụ dị ka WinThatWar ruo oge ụfọdụ ugbu a."
"Ọ bụ oge mbụ m na-egwu egwu na m ga-ekweta, WinThatWar mere ka ihe dị mfe!"
"Dị ka ahụmahụ hacker, ọ dị mma ịsị WinThatWar bụ onye na-eweta ihe kacha mma n'ịntanetị ugbu a."
"Gini mere ị ga - eji mekpa ahụ ndị ahụ crappy na aghụghọ? Nwere ike ịdabere na WinThatWar iji nweta ọrụ ahụ."
"Ọ bụrụ na ị bụ novice hacker echegbula, dị ka WinThatWar dị mfe iji na-erite uru site."
"Ọ bụ ezie na ha kpọrọ m "Beastwood", nke ahụ bụ n'ihi ngwaọrụ ndị dị ịtụnanya sitere na WinThatWar."
"Veryjọ tụrụ m na nke mbụ mana ọ na - apụta na WinThatWar mere ka ndị na - egwu nfe dị mfe."
"Adịghị m ahapụ ọtụtụ reviews .. ma ego nke fun m nwere na WinThatWar Ndị aghụghọ ama m amanye."
"Amaara m otú hacks si arụ ọrụ, nke pụtara na enweghị m nsogbu ịnye WinThatWar nnukwu nyocha."
"Apụghị m inwe ihe ọ bụla ileghara-acha ọkụ mgbe hacking na WinThatWar bụ zuru okè n'ihi na"
"Dị ka mmanya dị mma, ọ dị ka WinThatWar emeela agadi maka ndị ọkachamara."
"Gini mere mmadu obula ji ju iji WinThatWar? Ọ dịka ịjụ ego efu!"
"Enweela m ihe ndị na-ezighi ezi & aghụghọ, nke mere na m na-azụkarị ahịa na WinThatWar."
"WinThatWar awade undetected Ndị aghụghọ, nke bụ ihe niile m na mgbe chọrọ."
"Ma ọ bụ Aimbot ma ọ bụ Wallhack / ESP, WinThatWar ga-enwe ihe ịchọrọ."
"Ahụmahụ na seasoned hackers ka na-aga n'anya ihe WinThatWar nwere na-enye."
"Mgbe ndụ rutere m, achọrọ m ịtụgharị WinThatWar Aimbot m ma zuru ike na mmeri ole na ole."
"Gịnị mere na ị gaghị chọrọ anataghị ikike na WinThatWar? Ha na-arụ ọrụ ahụ nke ọma."
"Enwere m obi abụọ na mbụ, mana m mụtara ngwa ngwa na WinTHatWar bụ nke kachasị mma."
"Akụkụ kachasị mma banyere WinThatWar kwesịrị ịbụ ụdị ntụgharị ọ bụla ha nyere."
"Anọ m na-atụ anya na a ga-atụba m na anụ ọhịa wolf, mana WinTHatWar mere usoro nbudata / nwụnye dị mfe."
"Dị ka onye na-arụ ọrụ na oge mbụ, WinThatWar mere ka ọ dịrị nfe dị mfe ịghọta etu esi arụ ọrụ hacking."
"Na ịtụnanya atụmatụ na a oké ọnụahịa-isi tụlee, WinThatWar nwere ike ịbụ n'elu ihe."
"Ọ dịghị otu n'ime ndị enyi m na-egwu egwuregwu vidio, aghaghị m iji WinThatWar nọrọ asọmpi!"
"Enwere ọtụtụ egwuregwu iji si ebe a na WiNThatWar, yabụ enweghị ihe mere ị ga-eji jụ enyemaka ha."
"Echere m na m bụ "nnukwu nwoke na kampos", nke ahụ bụ ruo mgbe m jiri WinThatWar!"
"Ga-atụ uche na ọtụtụ ohere ma ọ bụrụ na ịnweghị uru nke WinThatWar!"
"Anyị niile enweghị ike ịdị ukwuu! Nke ahụ bụ belụsọ ma onye ọ bụla na-eji WinThatWar iji gaa n'ihu."
Ndị na-agba ọsọ nwere ike ị rejoiceụrị ọ rejoiceụ, dịka WinTHatWar mechara jikọta ndị mmadụ na PUBG Mobile aghụghọ. Enwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ na ịntanetị ma ọ nwere ike isi ike ịmata nke kachasị mma n'oge ụfọdụ, mana WinThatWar nwere ike ịhapụ nchịkọta ahụ na nchịkọta egwuregwu anyị. Ndị ọzọ PUBG Mobile cheats ga-amanye gị imechi egwuregwu gị tupu ị gbanwee, mana site na menu egwuregwu WinThatWar, mmezi na ịmegharị ahụ bụ ikuku. Mee mgbanwe na ọsọ ma ọ bụ ebe ịchọrọ nke PUBG aimbot gị, yana ịkọwapụta nke ESP (Ihe Mmetụta Sensory Na-achọghị) ịchọrọ ịrụ ọrụ!
Q2. Achọrọ m iwepu nchebe na mgbochi nje iji cheat?
A2. Ọ dị mkpa ịnwe nchedo nwere nkwarụ ọkachasị buut nwere nsogbu na BIOS iji nwee ike iji aghụghọ a ka ịghara inwe nkwarụ ga-emesị nye Error na mmalite.
Ma ndị omekome na ndị novice nwere ike irite uru na ngwaọrụ anyị, ihe ị ga - eme bụ ịzụta igodo ngwaahịa ma ị nwere ike ibudata PUBG Mobile LD emulator ozugbo.
Nke a bụ ebe zuru oke iji merie asọmpi ahụ, yabụ ka anyị bido taa!
Njikere Na-achị na PUBG Mobile Emulator LD mbanye anataghị ikike?